लिम्बू स्रष्टाको तङसङ्- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
लिम्बू स्रष्टाको तङसङ्
काठमाडौँ — लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक पहिचान के हो ? मौलिक चिनारी कतातिर चुक्यो ? अनि इतिहास कसरी अँध्यारोतिर धकेलियो ? लिम्बू कविहरूले शनिबार राजधानीमा आ–आफ्ना सिर्जनामार्फत् बहस गरे ।
कार्यक्रमको नामै थियो– ‘कविता तङसङ् । लिम्बू भाषामा तङसङ्को अर्थ अनुष्ठान हुन्छ । मुलुकका विभिन्न भेकबाट आएका २२ जना कविहरूले साहित्यमार्फत् आफ्ना मौलिक अस्तित्व अनुष्ठान गरेका हुन् ।
जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा याक्थुङ लेखक संघले गरेको कार्यक्रममा लिम्बू समुदायमा ग्रहदशा र अनिष्ट रोक्न तीन रातसम्म गरिने महत्त्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानका रूपमा लिइने तङसङ्को झल्को दिने गरी अग्रभागकै भित्तातिर ‘सिलाम साक्मा’ नामक तक्मा झुन्ड्याइएको थियो । लिम्बू संस्कृतिमा नराम्रो कुरा छेक्न यसो गरिन्छ ।
त्यसको वरिपरि बाँसबाट निर्मित डालोमा लिंगो अड्याइएको थियो । तङसङ्मा कविहरूले लिम्बू समुदायका विविध पक्ष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक जीवनका प्रतिविम्ब, प्रेमका वियोगान्त कथालगायतका सन्दर्भ पस्के । कवि बिमला तुम्खेवाले सार्वजनिक बसको यात्रालाई स्मरणसँग आफूलाई तुलना गर्दै सहरको भीडमा हराइरहेको आफ्नो भूगोल, देश र ठाउँलाई खोजी गरिन् ।
उत्तम लिम्बूले ‘तर तिमी आएनौ’ शीर्षकमा मुलुकको राजनीतिक अराजगता, जीवनको बाध्यात्मक परिस्थितिसँगै घर छोडेर हिँडेकाहरूलाई आमाले पर्खिरहेको सन्दर्भ पस्के ।
सीता तुम्खेवाले ‘ढुंगा’ शीर्षकको कवितामा जति नै समयले नेटो कटे पनि ढुंगाको कठोरता कहिल्यै परिवर्तन नहुने भाव पोखिन् । अप्सरा लावतीले ‘कलियुगको मध्यधारमा’ कवितामा लिम्बू महिला र सबैलाई तङसङ् आत्माहरू जगाउँदै पूर्खाले अर्जेको भूमिमा एकताबद्ध भएर चेतनशील हुन आग्रह गरिन् । कवि साङसेन वारफले मातृभाषामा लेखेको नागरिकताको माग गरे ।
चन्द्रवीर तुम्बापो, हाङयुग अज्ञात, प्रकाश आङ्देम्बे, प्रकाश थाम्सुहाङ, सुन्दर कुरुप, स्वप्निल स्मृति, मुनाराज शेर्मा, राज माङ्लाक, विष्णु नेम्वाङ, बच्चु हिमांशुजस्ता कविताहरूले लिम्बू जातिको पुर्ख्यौली संस्मरण, इतिहास, मौलिक संस्कृति र भाषामाथि भइरहेको अतिक्रमणको लेखाजोखा गरे ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०९:०६